कोरोना संक्रमण पछी द भ्वाईस अफ नेपालका कोच बरिष्ठ गायक दिप श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना….. – SUDUR MEDIA
कोरोना संक्रमण पछी द भ्वाईस अफ नेपालका कोच बरिष्ठ गायक दिप श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना…..
May 28, 2021 May 29, 2021 AdminLeaveaComment on कोरोना संक्रमण पछी द भ्वाईस अफ नेपालका कोच बरिष्ठ गायक दिप श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना…..
बरिष्ठ गायक दिप श्रेष्ठलाई कोरोना सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । द भ्वाइस अफ नेपालको कोच समेत रहेका गायक श्रेष्ठलाई कोरोना सं’क्रमण पछी स्वास्थ्यमा स’मस्या देखिए पछि ह्याम्स अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ ।
स्वास्थ्यमा स’मस्या देखिए पछी अस्पताल भर्ना गर्दा उनमा कोरोना सं’क्रमण पुष्टि भएको गायिका तृष्णा गुरुङले बताएकी छन । सार्बजनिक तस्विरमा गायक श्रेष्ठलाई अक्सिजन सहित आइसीयुमा राखिएको देख्न सकिन्छ । यस्तै द भाइस कै कोचद्वय प्रमोद खरेल र तृष्णा गुरुङलाई पनि कोरोना सं’क्रमण भएर निको भइसकेका छन ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः स्वास फेर्न गाह्रो भो भनेका व्यक्ति अस्पतालबाटै गायब, श्रीमती आईसियूमा (भिडियो) ! बाग्लुङ ढोरपाटन नगरपालिका ३ का धनबहादुर जिसी पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजबाट बेपत्ता भएका छन् । आफ्नी श्रीमतीको उपचारका लागी आएका जिसी श्रीमतीलाई आईसियूमा छोडेर बेपत्ता भएका हुन् ।
उपचारको क्रममा श्रीमतीलाई कोरोना देखिएको र स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएकाले उनलाई आईसियूमा उपचार गरिएको छ । जिसीले घरमा फोन गरेर आफूलाई पनि स्वास फेर्न गाह्रो भएकोले अर्को बिरामी कुरुवा पठाउन भनेका थिए । उनका आफन्तका अनुसार अन्य बिरामी कुरुवा आएपछि उनी अस्पतलाबाटै हराएका हुन् ।
उनको खोजीका लागी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र उनका आफन्तहरु लागि परेका छन् । आखिर किन आफ्नी बिरामी श्रीमती आईसियूमा छोडेर उनी बेपत्ता भए ? थप समाचार हेर्नुहोस् यो भिडियोः
आजको राशिफल हेर्नुहोस : मिति २०७८ साल जेठ १५ गते शनिबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २९ तारिख
नेपाली ट्याक्सी चालक शुभाकरलाई दु.र्व्यवहार गर्ने अमेरिकी युवती पक्राउ, दु.र्व्यवहार पछी काम छोडेका शुभाकरलाई विश्वभरबाट आयो एक करोड रुपैया सहयोग
साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस : असार २० गते आईतबारदेखी असार २६ गते शनिबार सम्मको